ရွေးချယ်ခွင့် | Sanchaung Journal
သူ့ကို အီတလီ ပေါင်မုန့်ဖုတ်ဆရာတစ်ဦးမှ မွေးဖွားခဲ့တယ်။ ဖခင်က အော်ပရာကြိုက်နှစ်သက်သူဖြစ်ပြီး သူ့အတွက် နာမည်ကြီးအဆိုတော်တွေရဲ့ သီချင်းခွေကို အမြဲ ဝယ်လာပေးတတ်တယ်။ သီချင်းတွေ အမြဲနားထောင်ဖြစ်ခဲ့လို့ ငယ်ငယ်ကတည်းက သီချင်းဆိုတာကို သူဝါသနာပါခဲ့တယ်။
အသက်အရွယ် ကြီးပြင်းလာချိန်ထိ သီချင်းဆိုတာကို သူစွဲစွဲမက်မက် တပ်မက်နေခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ကလေးတွေကို သူချစ်တယ်။ ကျောင်းဆရာကောင်းတစ်ဦး ဖြစ်ဖို့လည်း သူမျှော်မှန်းထားခဲ့တယ်။ ဒါကြောင့် ဆရာအတတ်သင်ကျောင်းတက်ရင်း Arrigo Pola လို့ခေါ်တဲ့ အဆိုတော်ဆီမှာ သူတပည့်ခံခဲ့တယ်။
ကျောင်းပြီးတဲ့အချိန် သူက ဖခင်ကို “ကျောင်းဆရာနဲ့ အဆိုတော် ကျွန်တော်ဘာကိုရွေးသင့်သလဲ ဖေဖေ”လို့ မေးခဲ့တယ်။
ဖခင်က လေးလေးနက်နက်နဲ့ “တကယ်လို့ ထိုင်ခုံနှစ်လုံးကို သားတစ်ပြိုင်ထဲထိုင်ခဲ့ရင် ထိုင်ခုံနှစ်လုံးကြားထဲ သားပြုတ်ကျသွားလိမ့်မယ်။ ဒါကြောင့် ထိုင်ခုံတစ်လုံးကိုပဲ သားသေချာရွေးရလိမ့်မယ်” လို့ ဖြေခဲ့တယ်။
အဖေ့စကားကို နားထောင်ပြီး ကျောင်းဆရာအလုပ်ကို သူရွေးခဲ့တယ်။ စာသင်ရင်း ကျောင်းဆရာအလုပ်မှာ သူမဖြစ်ထွန်းနိုင်မှန်း သိခဲ့လို့ ကျောင်းကိုကျောခိုင်းပြီး သီချင်းဆိုဖို့ သူရွေးခဲ့ပြန်တယ်။
သူအသက် (၁၇)နှစ်အရွယ်မှာ ဖခင်ကသူ့ကို Rossini တီးဝိုင်းထဲ စာရင်းသွင်းပေးခဲ့တယ်။ တီးဝိုင်းသွားလေရာတစ်လျှောက် သူလိုက်ပါသီဆိုခဲ့တယ်။ များသောအားဖြင့် အခမဲ့ ဖျော်ဖြေတင်ဆက်မှုတွေမှာ သူအမြဲလိုက်ပါပြီး လူတွေ သူ့ကိုသတိထားမိလာအောင် ကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့် ၇နှစ်သာကြာသွားတယ်။ သာမန်အဆိုတော် ဘဝကနေ သူမတက်ခဲ့ဘူး။ သူ့ပတ်ဝန်းကျင်က မိတ်ဆွေအပေါင်းအသင်းတွေက အသီးသီး အောင်မြင်နေရာ ရသွားခဲ့ပေမယ့် သူ့မှာ မိသားစုကို ရှာကျွေးနိုင်တဲ့ အင်အားတောင် မရှိခဲ့ဘူး။ ကံဆိုးမသွားလေရာ မိုးလိုက်လို့ရွာဆိုသလို ဒီအချိန်မှာပဲ သူ့လည်ချောင်းမှာ အကျိတ်တစ်ခုပေါက်ခဲ့တယ်။ Ferraraမှာ ပြုလုပ်ခဲ့တဲ့ ဖျော်ဖြေပွဲတစ်ခုမှာ သူအားရပါးရ သီဆိုဖျော်ဖြေခဲ့ပေမယ့် ပရိသတ်တွေရဲ့ မလိုလားတဲ့ အော်သံတွေကြောင့် စင်ပေါ်ကသူဆင်းခဲ့ရတယ်။
ဒီလိုအချိန်မှာ လမ်းတစ်ဝက်မှာပဲ နောက်ဆုတ်ဖို့ သူရွေးချယ်နိုင်သလို မရပ်မနား ဇွဲလုံ့လနဲ့ ရှေ့ဆက်သွားဖို့လည်း သူ့မှာရွေးချယ်ခွင့်ရှိခဲ့တယ်။ ဖခင်ပြောခဲ့ဖူးတဲ့ စကားကို သူပြန်ကြားယောင်ပြီး ဇွဲလုံ့လနဲ့ ရှေ့ဆက်ဖို့ သူရွေးခဲ့တယ်။
လအတန်ကြာပြီးတဲ့နောက် ပြိုင်ပွဲတစ်ခုမှာ “La Bohème” ဆိုတဲ့ အော်ပရာသီချင်းတစ်ပုဒ်နဲ့ သူဝင်ပြိုင်ခဲ့တယ်။ ပြိုင်ပွဲအပြီးမှာ ပရိသတ်ဆီက မိုးခြိမ်းသံထက်ပြင်းတဲ့ လက်ခုတ်သံကို သူအောင်နိုင်ခဲ့တယ်။ အဲဒီနောက် သူ့အောင်မြင်မှုတွေ တရှိန်ထိုး တက်လာခဲ့တယ်။ ကမ္ဘာ့အော်ပရာ ပြဇာတ်ခုံပေါ်မှာ အအောင်မြင်ဆုံး သီဆိုသူအဖြစ် သူကျော်ကြားခဲ့တယ်။
သူ့အောင်မြင်မှုကို သတင်းထောက်တစ်ယောက် တွေ့ဆုံမေးမြန်းခဲ့ရာမှာ သူက “မပြတ်ရွေးချယ်မှုမှာ ကျွန်တော်အရွေးမှန်ခဲ့လို့ အောင်မြင်ခဲ့တာပါ” လို့ ဖြေခဲ့တယ်။
ရွေးချယ်မှုမှန်ခဲ့လို့ အောင်မြင်မှုလမ်းကြောင်းပေါ် သူရောက်ခဲ့တယ်။ အဲဒီကမ္ဘာ့တစ်ဝန်းကို ကိုင်လှုပ်နိုင်ခဲ့တဲ့ အီတလီအော်ပရာ အဆိုတော်က Luciano Pavarotti ပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လူတိုင်းမှာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိခဲ့ကြတယ်။ ရွေးချယ်မှုတွေထဲမှာ သာမန်အဆင့် နေ့စဉ်စားဝတ်နေရေးကနေ အမြင့်ဆုံးအဆင့် ပညာသင်၊ အလုပ်ရှာ၊ လင်ယူသားမွေးအထိ ရွေးချယ်ခွင့် ရှိခဲ့ကြတယ်။ ဒါပေမယ့် ဘဝမှာရွေးချယ်ခွင့် မရခဲ့တာ တစ်ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါက ကိုယ်ရဲ့ မွေးဖွားရာနေရာ၊ ဒေသပဲဖြစ်တယ်။ ကျန်တာအားလုံးကို ကိုယ်တိုင်ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ခွင့် ရှိခဲ့ကြတယ်။
ရွေးချယ်ခြင်းက ကမ္ဘာပေါ်မှာ အကြီးမားဆုံးအင်အားဖြစ်တယ်။ လူ့လောက၊ လူ့ဘဝအောင်မြင် ကျရှုံးမှုတွေကို ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်။
အထီးကျန်ခြင်းထဲက ရွေးချယ်ခွင့်ရှိခဲ့ရင် စိတ်ရဲ့နှစ်သိမ့်မှုကို ရနိုင်တယ်။ ယုံကြည်မှုကို ပိုခိုင်မာစေတယ်။
နာကျင်ခြင်းထဲက ရွေးချယ်ခွင့်ရှိခဲ့ရင် ကုစားတဲ့ နည်းလမ်းကို ရနိုင်တယ်။ ကြံခိုင်မှုအင်အားကို ရစေနိုင်တယ်။
အမှောင်ထဲက ရွေးချယ်ခွင့်ရှိခဲ့ရင် အမှောင်ထွက်လမ်းကို ရနိုင်တယ်။ အလင်းကို ရင်ဆိုင်ကြုံတွေ့စေတယ်။
ကျဆုံးခြင်းထဲက ရွေးချယ်ခွင့်ရှိခဲ့ရင် ဆင်းရဲဒုက္ခကို လမ်းကြောင်းလွဲနိုင်မယ်။ အသစ်တစ်ဖန်ပြန်စဖို့ အင်အားဖြစ်စေတယ်။
အောင်မြင်ခြင်းထဲက ရွေးချယ်ခွင့်ရှိခဲ့ရင် အမြင့်ကို ပိုတက်လှမ်းနိုင်မယ်။
လူ့တန်ဖိုးကို အကောင်အထည်ဖော်ချင်ရင် ရွေးချယ်ခြင်းကို သတ္တိရှိရှိရင်ဆိုင်ရမယ်။ ရွေးချယ်ဖို့ တွန့်ဆုတ်မနေသင့်ဘူး။
ရွေးချယ်ခြင်းရှိမှ ဘဝက မပြတ်လှုပ်ရှားတက်ကြွမှုတွေ ရှိနေမယ်။
ရွေးချယ်ခြင်းရှိမှ ဘဝကံတရားရဲ့ ကြီးမားတဲ့အင်အားကို ဆုတ်ကိုင်နိုင်မယ်။
ရွေးချယ်ခြင်းရှိမှ စိတ်ကူးအိပ်မက်တွေကို အကောင်အထည်ဖော်နိုင်တယ်။
ရွေးချယ်ခြင်းနှစ်မျိုးရှိတယ်။ မှန်ကန်တဲ့ရွေးချယ်ခြင်းနဲ့ မှားယွင်းတဲ့ရွေးချယ်ခြင်းတွေဖြစ်တယ်။
မှန်ကန်တဲ့ ရွေးချယ်ခြင်းက ပေးဆပ်ခဲ့တဲ့ကြိုးစားမှုတွေအတွက် လှပတဲ့အဆုံးသတ်ကို ရရှိစေတယ်။ ဒါမှအောင်မြင်တဲ့ လမ်းကြောင်းပေါ်က မချော်ထွက်နိုင်ဘူး။ စစ်မှန်တဲ့ လူ့တန်ဖိုးကို သိရှိခံစားစေနိုင်တယ်။
မှားယွင်းတဲ့ ရွေးချယ်ခြင်းက ဘဝကို မပျော်ရွှင်စေတဲ့ ရင်းမြစ်ဖြစ်တယ်။ ကိုယ့်ကြိုးစားမှုကို အလာဟသဖြစ်စေတယ်။ ကိုယ့်အပြုအမှုကို အမြင်ရိုင်းစေတယ်။ ဘဝတစ်ခုလုံးကို အမှောင်ဖုံးစေနိုင်ပြီး ကိုယ့်နာမည်ကို အမည်းစက်စွန်းစေနိုင်တယ်။
နာမည်ကြီး အောင်မြင်နေသူတွေကမှ ထူးကဲတဲ့ရွေးချယ်ခြင်းတွေကို ရွေးချယ်ခွင့်ရှိတာ မဟုတ်ပါဘူး။ သာမန်မှာလည်း ထူးကဲတဲ့ရွေးချယ်ခြင်းတွေကို ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်ရှိပါတယ်။
နျူကလီးယားတင် ရေငုပ်သဘောင်္ Kurskကြီး အေးခဲနေတဲ့ Barents ပင်လယ်ထဲ နစ်မြုပ်ချိန် သင်္ဘောစစ်သည်တွေရဲ့ ပထမဆုံး ရွေးချယ်ခြင်းက နျူကလီးယားတွေ ပင်လယ်ထဲယိုဖိတ်ပြီး ကမ်းစပ်နေပြည်သူတွေကို မထိခိုက်မိအောင် နျူကလီးယားဓာတ်ပေါင်းအိုးကို ပိတ်လိုက်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ ဒီလိုရွေးချယ်ခဲ့လို့ သူတို့ရဲ့ အသက်ရှင်ခွင့်တွေ မျှော်လင့်ချက်မဲ့ခဲ့ရပေမယ့် ရုရှားပြည်သူတို့ရဲ့ အသက်ကို ကယ်တင်နိုင်ခဲ့တယ်။
ရွေးချယ်တတ်ဖို့ သင်ယူပြီး လူ့ဘဝတက်လမ်းအတွက် ရွေးချယ်ပါ။ ပျော်ရွှင်တာကို ရွေးမလား? သောကကိုရွေးမလား? အောင်မြင်တာကိုရွေးမလား? ကျရှုံးတာကို ရွေးမလား? ရွေးချယ်ခွင့်က ကိုယ့်လက်ထဲမှာပဲရှိပါတယ်။
မူရင်း – ရွှေလီရောက်တုန်း ဝယ်ခဲ့တဲ့ စိတ်အဟာရ ကြက်ပေါင်းရည် စာအုပ်တွေထဲက တစ်ပုဒ်ပါ။ မူရင်းရေးသားသူကို ဖော်ပြမထားပါဘူး။ အင်တာနက်မှာ ရှာကြည့်တော့လည်း မတွေ့ပါဘူး။
source : http://nineninesanay.blogspot.com/2009/05/blog-post_19.html
Previous PostအစိုးရNext Postအိုဘားမားရဲ့ စကားပြောခြင်း အတတ်ပညာ